जब डाक्टरहरुले बिरामीको खुट्टा काटेर उसैलाई शिरानी बिछ्याइदिए !
भारत । एक व्यक्ति हस्पिटलको बेडमा आफ्नै काटेको खुट्टाको टुक्राको शिरानी लिइरहेको अवस्थामा क्यामरामा कैद भएका छन् ।
उनी एक बस दुर्घटनामा परेर अस्पताल पुर्याइएका थिए । एक स्कुल बसमा हेल्पर उनको बस र ट्राक्टर गत शनिबार ठोक्किएपछि घाइते भएका थिए ।
उनको खुट्टाको शल्यक्रिया गरिएको थियो । उक्त दुर्घटनामा २५ जना विद्यार्थी घाइते भएका थिए । भारतको घनश्याममा यस्तो घटना भएको हो ।
झाँसी मेडिकल कलेजमा डाक्टरहरुले उनको खुट्टा काटेर शिरानी राखिदिएको बिरामीका आफन्तले आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले तकिया दिनुको साटो काटेको खुट्टा शिरानी राखिदिएको भन्दै आक्रोश व्यक्ति गरेका छन् ।
आफन्तहरु हस्पिटल पुग्दा यस्तो दृश्य देखिएको थियो । अहिले उत्तरप्रदेश सरकारले घटनाबारे अनुसन्धान थालेको छ । त्यस्तै मेडिकल शिक्षा मन्त्री आशुतोष टण्डनले मेडिकलका अधिकृत डा. महेन्द्र पाल सिंहलगायत तीन जनालाई निलम्बन गरेका छन् ।
नयाँ चिकित्सक ऐन विरुद्ध डाक्टरहरु आन्दोलित
काठमाडौँ / भदौ १ गते देखि लागू भएका मुलुकी देवानी र अपराध संहिताको विरोधमा नेपाल चिकित्सक संघले चिकित्सकहरुले आइतबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन् । स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक बाहेक अरु सेवा
भदौ १ गतदेखि बिरामी नजाँच्ने डाक्टरहरुको चेतावनी
काठमाडौं। नेपाल चिकित्सक संघले भदौ १ गतदेखि डाक्टरहरुले बिरामी नजाँच्ने चेतावनी दिएको छ । सरकारले मुलुकी ऐन, अपराध संहिता २०७४ र फौजदारी कार्यविधिमा चिकित्सकलाई अपराधीको व्यवहार गरेको भन्दै संघले भदौ १
भारत । एक व्यक्ति हस्पिटलको बेडमा आफ्नै काटेको खुट्टाको टुक्राको शिरानी लिइरहेको अवस्थामा क्यामरामा कैद भएका छन् । उनी एक बस दुर्घटनामा परेर अस्पताल पुर्याइएका थिए । एक स्कुल बसमा हेल्पर
शरीरबाट पसिनाको साटो रगत नै बगेपछि डाक्टरहरु आश्चर्यमा
इटाली । एउटा इटालेली अस्पतालमा उपचारका लागि गएकी युवतीको बिमारदेखि डाक्टरहरु नै चकित परेका छन् । युनिभर्सिटी अफ फ्लोरेन्सका डर्माटोलोजिष्ट्स (रौँ, छाला, नंगसम्बन्धी डाक्टर) डाक्टर रोबर्टो म्याग्ली र मार्जिय काप्रोनीले क्यानेडियन